မျက်မမြင်ကောင်းမလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » မျက်မမြင်ကောင်းမလေး
Posted by Nan Shin on Feb 11, 2013 in Short Story |6comments
ကိုယ့်ကျင့်တရား ဘာသာပြန် ဝတ္ထုတို
မျက်မမြင်ဘဝကို ရရှိထားလို့ သူ့ ကိုသူ မုန်းတီးနေတဲ့ကောင်းမလေးတစ်ယောက်ရှိ တယ်။သူ့ က သူ့ ကိုယ်သူတင် မုန်းတာမဟုတ်ဘူး။သူအရမ်းချစ်တဲ့ သူ့ ချစ်သူကောင်း လေးကလွဲပြီး တစ်လောကလုံးမှာ ရှိတဲ့ လူတွေအားလုံးကို မုန်းတာ။သူ့ ကောင်လေးက သူ့ အနားက တစ်ဖဝါးမှ မခွါပဲသူ့ ကိုပြုစုပေးနေတာလေ။တစ်နေ့ မှာ’’ကောင်လေးရယ် ငါသာမျက်စိပြန်မြင်ခဲ့ရင် နင့်ကိုပဲ လက်ထက်မှာ သိလား.’’.လို့ ကောင်းလေးကို ပြော လိုက်တယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကောင်းမလေးအတွက် မျက်စိနှစ်လုံးစလုံးလှူမဲ့ အလှူရှင်ပေါ် လာပြီး သူ့ ရဲ့ မျက်စိတွေပြန်ကောင်းသွားတယ်။သူ အရာအားလုံးမြင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ သူ့ ချစ်သူကောင်လေးကို အရင်ဆုံး ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ ကောင်လေးက မျက်မ မြင်လေး တစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒိအချိန်မှာ ကောင်းလေးက သူ့ ကိုမေးတယ်။
‘’ကောင်မလေး မင်းအခု ငါအပါအဝင် အရာအာလုံးကို မြင်နိုင်စွမ်းရှိသွားပြီးဆိုတော့ငါ့ ကိုလက်ထက်တော့မှာပေါ့နော်’’
‘’ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း နင်လဲ မျက်မမြင်တစ်ယောက်ပဲ ဆိုတော့ ငါနင့် ကို လုံးမလက်မ ထက်နိုင်ဘူး’’ အဲ့ဒိအချိန်မှာ ကောင်လေးဟာ ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ ငိုရင်းသူ့ အနားကထွက်ခွာ သွားခဲ့တယ်။ကောင်မလေးအတွက် စာလေးတစ်ဆောင်လဲ ရေးပေးထားခဲ့တယ်။
‘’ကောင်မလေး ငါ့ရဲ့ မျက်လုံးတွေကို သေသေချာချာ ဂရုစိုက်လိုက်ပါနော်’’
ဒါဟာ လူတွေရဲ့ အခြေနေအပြောင်းအပြောင်းအလဲပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့ ရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဥပမာလေးတစ်ခုပါ။ဘဝမမေ့တတ် တဲ့ လူဆိုတာ သိပ်ကိုရှားပါတယ်။ ဘဝဆိုတာ လှပပြီးကြည်နူးဆွဲမက်ဖွယ် လက်ဆောင်တစ်ခုပါ အကြင်နာမဲ့ပြီး ကြမ်းတမ်းရက်စက်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကို မပြောဆိုခင်….. စကားမပြောနိုင်သူတွေကို သတိရပါ။ စားနေရတဲ့ အစားအသောက်ရဲ့ အရသာညံ့ဖျင်းမှုကို အပြစ်တင်မပြောဆိုခင်…. စားစရာမရှိတဲ့ သူတွေကို သတိရပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူအိမ်ထောင်ဘက်ကိုအပြစ်တင်မပြောဆိုခင်…… ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဘက်တစ်ယောက်ရဖို့ ဘုရားသခင်ထံမှာ ငိုယိုပြီးတောင်းဆို နေကြသူတွေကို သတိရပါ။ ကိုယ်ရထားတဲ့ဘဝကို ကိုယ်တိုင်အပြစ် ပြန်မမြင်ခင်……. စောစောစီးစီး ဆုံးပါးသွားကြတဲ့ သူတွေကို သတိရပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးကလေးငယ်တွေကို အပြစ်မတင်ခင်……. သူတို့ ကိုယ်တိုင် ကလေးမရနိုင်လို့ ပြင်းပြင်းပြပြ ကလေးရချင်နေသူတွေကိုသတိရပါ။ ကိုယ်နေမဲ့အိမ်ဟာ သန့် ရှင်းမှုမရှိလို့ ၊ညစ်ပေနေလို့ ၊တံမျက်စည်းလှည်းမည့်သူ မရှိလိုဆိုပြီး ဂျီးများ ပြစ်တင်မှုတွေမပြုခင်……….. အိမ်ခြေရာမဲ့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်လျှောက်သွားနေရတဲ့ သူတွေကို သတိရပါ။ ခရီးရှည် ကားမောင်းထွက်ခွါရမှာကို မညည်းညူခင်……………. ကားမရှိလို့ ခရီးဝေးကို ကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်နေရသူတွေကို သတိရပါ။ ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့ ကိုယ့်အလုပ်ကို ငြီးငွေ့ ပြစ်တင်မှုမပြုခင်………… အလုပ်လက်မဲ့တွေ၊မသန်စွမ်းလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်သူတွေ၊ကိုယ့်အလုပ်ကို အားကျ နေသူတွေကို သတိရပါ။ သူတပါးရဲ့ ချွတ်ချော်မှားယွင်းမှုကို လက်ညှိူးကောက်ကောက်ထိုးပြီး အပြစ်မတင်ခင်…. လောကမှာ အမှားကင်းတဲ့သူရှိသလား..ငါကိုယ်တိုင်ရော အမှားကင်းသူ ဖြစ်ရဲ့ လားဆို တာကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘဝမှာ စိတ်ပျက်ငြီးငွေစရာတွေ စိတ်ဓါတ်ကျစရာတွေ ကို တွေ့ ကြုံမိမယ်ဆိုရင် တောင် ပြုံးဖြစ်အောင်တော့ ပြုံးလိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်နဲ့ ကံကြမ္မာက ကျွန်တော်တို့ ကို အခုချိန်ထိ အသက်ရှင်ခွင့်ပေးထား သေးတယ် မဟုတ်လား။ ဘဝဆိုတာ အရောင်စုံ အရသာစုံ နဲ့ မြတ်နိုးစွဲမက်ဖွယ် လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒိဘဝထဲကို ရဲရဲကြီး ရူးသွပ်နစ်ဝင် လိုက်ပါ။ ပျော်ပျော်ကြီးခံစားလိုက်ပါ။ ဘဝကို ရရှိခြင်းအထိန်းအမှတ် အားပါးတရ ထကလိုက်ပါ။ ဘဝကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ရောက်အဖြစ်နဲ့ ဂုဏ်ယူပြီး ပီတိသောမနဿတွေ ဖြစ်လိုက်စမ်းပါ။
နန်းရှင် ဘာသာပြန်သည်။ ၁၊၂၇၊၁၃။
ကြိုဆိုပါတယ် နန်းရှင်ရေ ..
အားပါးတရ တော့ မကပါရစေ နဲ့ နော် ..ပြုံးရုံလောက်သာ ပြုံးပါရစေ ..
ကျုပ်အထင် ကောင်လေးက မျက်လုံးတစ်လုံးပဲလှူရမှာ..
..မျက်မမြင် ကောင်းမလေးဂေါင်းဇင်နဲ့ရေးးးဒဲ့. နန်းးးရှင်းးးရေး…